$ 15.39 bilyan: Suuqa kirada baabuurta ee Shiinaha ayaa sare u kacaya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » $ 15.39 bilyan: Suuqa kirada baabuurta ee Shiinaha ayaa sare u kacaya
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • Wararka Shiinaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Suuqa ayaa la qabsan doona horumarka xawaaraha sare leh ka dib markii warshadaha kireysiga baabuurku ay isku shaandheyn sameeyeen shantii ama lixdii sano ee la soo dhaafay.
Kobaca xawaaraha sare ayaa loo saadaaliyay suuqa kirada baabuurta ee Shiinaha.
Suuqa kirada baabuurta ee Shiinaha ayaa gaadhay $ 15.39 bilyan sanadka 2020.
Suuqa kirada baabuurta ee Shiinaha ayaa si joogto ah u sii fidaaya.
Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee warshadaha, suuqa kirada baabuurta ee Shiinaha ayaa ku dhow inuu galo xilliga kobaca xawaaraha sare iyo 100 bilyan yuan (US $ 15.39 bilyan) sanadka 2022.
Sannadkii 2021, warshaduhu waxay arkeen qaar ka mid ah shirkadaha kiraysta baabuurta oo leh tartan sare oo ay ka mid yihiin Kirada Baabuurka ee Shiinaha iyo eHi oo qaadanaya qaybta ugu weyn ee suuqa.
Waxaa jira 418 milyan oo Shiine ah oo haysta liisan wadista sannadka 2020, laakiin lahaanshaha baabuurka gaarka loo leeyahay waa 244 milyan oo keliya isla sannadkaas. Markii tirada darawalada sharciga ah ee aan lahayn baabuur gaar ah ay aad u korodhay, ayaa waxaa soo baxay saldhig weyn oo macaamiil u ah suuqa kirada baabuurta, ayaa lagu xusay warbixinta.
Thanks to siyaasadaha wanaagsan iyo isticmaalka sii kordhaya, baahida kirada baabuurka ee waddanku si joogto ah ayay u sii fidaysaa, ayaa lagu yiri warbixinta.